हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! – Kavrepati
Home / रोचक / हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने !
हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने !
admin July 12, 2021	रोचक Leaveacomment 341 Views
तपाईंको शरीरले जति वी’ र्य बनाउँछ, त्यस हिसाबले जीवनभर एउटै से’ क्स पा’ र्ट’ नर हुनु उति राम्रो आइडिया पक्कै होइन । यसको सदुपयोग गर्ने हो भने त से ‘क्स पा’ र्टनर बढीभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, होइन त ? त्यसैले त स्त’ नपायी र अन्य जन्तु समूहमा एउटै से’ क्स पा’ र्ट’ नर विरलै हुन्छ । मानिसका बारेमा पनि यस्तै हुनुपर्ने हो तर वास्तवमा कैयौँ संस्कृतिहरुमा कैयौँ जीवनसाथी बनाउने र बहुविवाह गर्ने चलन छ ।
एउटा अध्ययनअनुसार संसारभरिका ८३ प्रतिशत संस्कृतिहरुमा बहुविवाह प्रथा छ । यसका बाबजुद पनि अधिकांश संस्कृतिमा व्यवहारगत रुपमा हेर्दा एक स्त्री या एक पुरुषसँग विवाह गर्ने चलन छ । यसको एउटा मात्र कारण, एकभन्दा बढी जीवनसाथीको खर्च वहन गर्न नसक्नु नै हो ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न के उठ्छ भने एक स्त्री या पुरुषले एक मात्र विवाहमा चित्त बुझाउने कुरा बेकार हो भने बेग्लाबेग्ला संस्कृतिमा यो चलन किन छ त ? एउटा नयाँ अध्ययनले यस बारेमा व्याख्या गरेको छ । नेचर न्युज जर्नलमा छापिएको एउटा आलेख अनुसार शोधकर्ताहरुको यौ’ न स’ म्पर्कबाट स’ र्ने रोग या आधिपत्यको कारण एक स्त्री या पुरुषबीच हुने विवाह लोकप्रिय बनेको हो । शोध कर्ताका अनुसार जुन बेला मानिसले शिकारबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँथ्यो, त्यो बेला बहुविवाह व्यापक प्रचलनमा थियो र समयसँगै यस किसिमको प्रथा कमजोर हुन थाल्यो । सामाजिक दबाबका कारण पनि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन थाल्यो ।
शोधपत्रका लेखकमध्ये एक क्रिस बाबर भन्छन्, ‘यसलाई सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने अपराधबाट बच्नका लागि हामीले प्रहरी विभाग बनाएजस्तै हो । पहिला बहुविवाह धेरै हुन्थ्यो किनभने त्यो बेला खेतीकिसानीका लागि बढीभन्दा बढी श्रमिक चाहिन्थ्यो ।’
जंगलमै बस्ने, प्राकृतिक जीवन जिउने क्रममा यौ’ न सं’ क्रमण उति ठूलो समस्या थिएन । त्यसैले बहुविवाह प्रचलित हुनु स्वाभाविक थियो । कसैलाई यौ’ नरो’ गले सताए पनि त्यसले अरुलाई सार्ने र संक्रमण हुने त्यति खतरा थिएन । यो रोग लागे पनि समयसँगै आफैँ निको हुन्थ्यो । त्यो बेला यौ’ न रोगको चपेटामा पर्नेहरुको संख्या निकै कम हुन्थ्यो । खेतीकिसानी युगसँगै क्रमशः यौ’ नस’ म्बन्धी रोग पनि जन्मन थाल्यो र यसले संक्रमणको रुप लिन थाल्यो । यसको खतरा यति व्यापक हुन्थ्यो कि मानिसहरुले बहुव्यक्ति यौ’ न स’ म्पर्कतर्फ ध्यान दिनै छाडे ।
अचेल यौ’ नस’ म्पर्कबाट सर्ने रोगका उपचार सम्भव छ तर पहिला यस्तो थिएन किनभने मेडिकल साइन्सले यति धेरै विकास गरिसकेको थिएन । एकल विवाह लोकप्रिय हुनुको कारण स’ न्तानको लालनपालन राम्रोसँग हुन थालेको थियो । शु’ क्रकी’ ट मार्दै हुनुहुन्छ ? अचेल हरेक चारमध्ये एक युवामा वी’ र्यको गुण’ वत्ता कमजोर हुँदै जान थालेको छ । सं’ सारभरि नै वी’ र्यको स्तर घट्ने समस्या देखिएको एउटा शोधले देखाएको छ ।
जागिरको तनाव, जीवनशैली र खास किसिमका रसायनका कारण वी’ र्यको स्त ‘र खस्केको विशेषज्ञहरुको दाबी छ । वी’ र्यको स्तर खस्किनेको अर्थ प्र’ जन’ न शक्तिमा ह्रास हुनु हो । बिएमजे ओपन पत्रिकाका अनुसार वी’ र्यको गुण’ स्तर खस्किएका कारण २० प्रतिशत लोग्नेस्वास्नीले सन्तान जन्माउन सकेका छैनन् । संसारभर नै यो समस्या देखिएको छ । सन् १९८९ देखि २००५ का बीच फ्रान्सेली पुरुषहरुको स्पर्म काउन्टमा एक तिहाईले कमी देखिएको छ । १५ वर्षको दौरानमा चिनियाँ पुरुषहरुको वी’ र्य गुणस्तर पनि स्वाट्टै घटेको छ । किन घट्दैछ ?
वी’ र्यको गुणस्तर किन घट्दैछ त ? ब्रिटिस जर्नल अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनका अनुसार तपाईंले सातामा २० घण्टाभन्दा बढी टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईंको गुणस्तर घटाउँछ । आर्काइभ अफ इन्टरनल मेडिसिनको शोधले भन्छ, तपाईंको मोटोपनले पनि वी’ र्यको स्तर घटाउँछ । सामान्य तौल भएका पुरुषको तुलनामा मोटा पुरुषका वी’ र्य स्तरहीन हुन्छ । ४२ प्रतिशत मोटा मानिसको वी’ र्यले काम गर्दैन । त्यसैले खापिन र व्यायाममा बढी नै जोड दिनुपर्ने शोधको दाबी छ ।
त्यस्तै इन्टरनेसनल जर्नल अफ फर्टिलिटी एन्ड स्टर्लिटीका अनुसार कडा परिश्रम गर्ने श्रमिक र खाना पकाउने भान्सेका शु’ क्रकी’ ट सबैभन्दा असुरक्षित हुन्छन् । साइन्टिफिक रिपोर्ट २०१५ का अनुसार वी’ र्यको स्तर घटाउनेमध्येमा बिसफिनो ए –बिपिए) नामक रसायनको पनि ठूलो हात हुन्छ । घरायसी सामग्रीमा यसको प्रयोग हुन्छ । प्लास्टिक र कस्मेटिकका सामग्रीमा यसको भरपूर प्रयोग हुने गरेको छ । वी’ र्यका बारे तपाईंले थाहा नपाएका ९ कुरा वी’ र्यका बारेमा तपाईंलाई धेरै कुरा थाहा होला तर यी नौ कुरा थाहा नहुन सक्छ ।
– मानिसको वी’ र्यमध्ये आधा शु’ क्रकी’ ट मात्र सक्रिय हुन्छन् । सक्रिय शु’ क्रकी’ ट सिधा लाइनमा तैरिन्छ । सिधा लाइनमा तैरिने शु’ क्रकी’ ट नै सक्रिय वी’ र्य हुन् । केही शुक्रकीट वृत्तमा तैरिने गर्छन् र ती अन्यसँग साथ छुट्ने गर्छन् ।
– हालैको शोधअनुसार शु ‘क्रकी’ टलाई सन क्रिम र कमेस्टिकले व्यापक कुप्रभाव पार्छन् । हुन त यस कुरालाई केही वैज्ञानिकहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन् । – नेदरल्यान्डका एक जना माइक्रोस्कोप बनाउने व्यक्तिले पहिलो पटक स्पर्मको खोजी गरेका थिए । उनले के पत्ता लगाउन शुक्रकीट खोजेको भन्ने अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन । – औसत वी’ र्यमा शु ‘क्र’की’ टको संख्या ३० लाख हुन्छ । – सामान्य रुपमा पुरुषले एक सेकेन्डमा १५०० शु’ क्रकी’ टका कोष उत्पादन गर्ने गर्छ ।
– कुनै व्यक्तिले जीवनभर स्ख’ लन गर्दाको वी’ र्य जम्मा गर्ने हो भने यसको लम्बाई ६ माइलसम्म लामो हुने गर्छ । – गर्मीयाममा शु’ क्रकी’ टको सक्रियता कम हुन्छ । शरीरका अन्य अंगको तुलनामा स्पर्म सात डिग्री फरेनहाइट कुलिङ हुन्छ । त्यसैले हामीले ल्यापटपलाई सधैँ काखमा राख्नु हुन्न भन्नुको कारण सधैँ शु’ क्रकी’ टलाई आवश्यक पर्ने शितलताको तुलनामा बढी नै तापक्रम शरीरमा पठाइरहेका हुन्छौँ ।
– वी ‘र्य स्ख’ लन हुँदा ९० प्रतिशत शु’ क्र की’ ट विकृत भइसकेका हुन्छन् । ती शु’ क्रकी’ टले काम गर्न सक्तैनन् । – वास्तवमा लाखौँमा एक स्पर्मले नै महिलाको अ’ ण्डाणु’ सँग प्रजन’ न गर्छ । शुक्रवार/नागरिकन्युजबाट
Previous टेलिकमका ग्राहकलाई कम्पनीले दिने भयो यस्तो सुविधा
Next आयो अत्यतै दुख:द खबर, सजग रहनुहोला
महिला शिक्षिकाले आफ्नै विद्यार्थी कारमा राखिन् शा’री’रिक स’म्ब’न्ध, यसरी खुल्यो पोल
काठमाडौ । शिक्षकको पेशा धेरै उच्च मूल्यवान छ। शब्दमा नै सम्मान छ । तर कहिलेकाहिँ …